Amagama aqhelekileyo adidekileyo: Axhaswe kwaye ahlawulwe
Iilwimi Amazwi adibeneyo adibeneyo
Ukuxhaswa kunye noBated
Amazwi adibeneyo adibeneyo
Amagama afunwayo kwaye aphethwe ngamagama omzimba : azwakala ngokufanayo kodwa anentsingiselo eyahlukileyo.
Ukuxhamla ifomu elidlulileyo lesenzi isenzo , oku kuthetha ukucosa, ukuhlukumeza, okanye ukubeka ukutya (okanye ukubamba ) kwisicupho. Ikhonkco, ubungqina, okanye isilwanyana sinyanzelisiwe (sikhathwe, silingwa, sihendelwa).
Igama elibhaliweyo luhlobo oluthile lwexesha elidlulileyo lesenzi isenzo, oku kuthetha ukunciphisa okanye ukukhusela. Ukuphefumula kubalwa .
Bona kwakhona amanqaku okusebenzisa apha ngezantsi.
Kusoloko kulula kakhulu ukubamba iintaka ngeemigibe ezikhethiweyo ngamaxesha wonyaka xa kukho ukutya okuncinci.
" Kulabo abalinde ukuphefumlelwa kwintetho yebambiso yamabonakude , i-U-turn, ndinento enye yokuthetha: Ujika ukuba ufuna-le ntokazi ayiyikujika."
(UNdunankulu waseBrithani uMargaret Thatcher, 1980)
"Ilizwi elithatyathwe ngamanye amaxesha lingenakulungelelwanga endaweni ye- etymologically echanekileyo kodwa igama elingaqhelekanga (' lichithwe ; limiswe') kwintetho yokuphefumula ."
( I-American Heritage Dictionary yesiNgesi, uLwimi lwesi-4, 2000)
" Yisiphi isiseko se- bated , esingazange siyive ngexesha langoku? Ikopi ye- abate , ukusuka kwi-Old French abattre , 'yokubetha,' kwaye ngoku ithetha 'ukumodareyitha, ukunciphisa, ukunciphisa. Ngokuphathelele ukuphefumla, kuthetha 'ukufutshane' okanye 'ukubamba.' Xa uphefumula umphefumlo wakho, usibambe ngokulindeleke kwesiganeko esichukumisayo.
"Umkhonkco wayeyiShakespeare kwi-1596 uMthengisi waseVenice , apho iShylock ithi kuAntonio, 'Ngaba ndiza kugoba phantsi kunye nendawo yokugqithisa, / Ukuphefumula kunye nokuthobeka, / Yithi le: ngoLwesithathu lokugqibela? '"
(William Safire, "Bated Breath." I-New York Times , ngoMeyi 5, 2002)
(a) Ndiyathemba ngeminwe edlulileyo kunye ne- _____ iphefumuliso yexabiso legesi liza kuhla.
(b) Ukubamba umgca nge-hook ye- _____, Ndema emadwaleni emanzini anzulu.
Iimpendulo Zokuziqhuba Ukuzivocavoca
Iglosari yokuSebenza: I-Index yamazwi aqhelekileyo adidekile
Ama-200 ama-Homonyms, ama-Homophones kunye nee-homographs
Iimpendulo Zokuziqhelanisa Ukuzivocavoca: Ukuncedwa nokuBated
(a) Ndiyathemba ngeminwe edlulileyo kunye nokuphefumula ukuba amaxabiso egesi aya kuhla.
(b) Ukubamba umgca ngehitshi efunyenwe , Ndema emadwaleni emanzini anzulu.
Stair no Stare
ICarse and Course
Vice kunye neVise
Umbono kwaye ubonwe
Eyona ndlela kunye Nenye indlela: Iblosari yokuSebenza
Ukutya okunomsoco kunye noNondlo
Unomdla kwaye unomnandi
Amagama aqhelekileyo adidekileyo: I-Suit, Suite, neTy Sweet
I-Etc kunye ne-Et al.
I-Boar, iBoor, neBore
I-Planet yeMercury njengeProjekthi yeSayensi yeNzululwazi yeSikolo
I-"Caseing Self-Case Case" kaConrad Roy III
Indlela Ovulekileyo Ngaba Umlomo Wam Ngaba Kufanele Ndibe Ndiyicula?
La Politesse - Iimpapasho zeFrench zePolitiki
I-SAT izikolo zokungeniswa kwiiyunivesithi zikaRhulumente zaseVirginia
LaVeyan uSathana kunye neCawa likaSathana
IiNtetho eziBini kunye neeNkcukacha zamaLungelo eNkcubeko
Imisebenzi Yomsebenzi Wefilimu - Yintoni abantu abayiyo kwi-Credits ye-Movie?
Ukuqonda nokusebenzisa iiNkcukacha zoLwazi lweRekhodi eDelphi
Gcina igama elithi Puns
Iingcebiso kunye neZakhono ezimbalwa zokudibanisa i-Ballet Skirt
Iibhola zeBhola yePlanga - IziKhuseli zokuKhusela ukunqoba iiBhiliyadi
Inkcazo yePiramidi engaphambukiyo
Ii-40 ze-Bush Quotes zexesha lonke
Ukuguqulela 'Kususela' kuSpanish
Iinkcukacha Ezifutshane Nge-Efese yasendulo
'Iimventa zeHuckleberry Finn' Quotes
Ndingawususa njani i-Gymnastics Mind Block?